. वामदेव ओलि,प्रचण्ड र नेपाल लाइ मिलाउन धमाधम गोप्य बार्तामा::Online News
भर्खरै : वामदेव ओलि,प्रचण्ड र नेपाल लाइ मिलाउन धमाधम गोप्य बार्तामा
काठमाडौ चैत २
कम्युनिस्ट पाटी नेकपा एमालेको २ समुहलाइ मिलाउन बामदेव गौतम लगभग सफलता नजिक पुगेका छन । उनको पहिले आज धुम्बारहिमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपि शर्मावली समेत रहेका ओलि र अर्का नेता माधवकुमार नेपाल बिछ भेटबार्ता भएको छ ।
गौतमले कि यता कि उता गरौं भनेर नेताहरू सङ्ग छलफल चलाएर भेट बार्ताको अवस्था बनाएका हुन । उनले आजै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सङ्ग छलफल गरेका छन । यो छलफल पनि एमाले र माओवादी बिछ एकताको एजेन्डामा केन्द्रित रह्यो ।
नेकपा एकता अभियान चलाएर सकृय रहेका गौतमले देशको राजनितीक ट्युइस्ट हुने गरि नयाँ परिस्थिति सृर्जना गर्न खोजि रहेका छन । यसमा उनिहरु सफल हुने हुन या हैनन ? सबैको चासोको बिषय बनेको छ ।
गौतमले ओलि र नेपाललाइ एक बनाउन खोजिरहेका छन । यसका लागि विभिन्न बिधामा छलफल चलाएका छन । जस्मा ओलिलाइ केही महिना सरकारलाइ नेतृत्व मै कायम राखेर पाटिलाइ पुरानै अबस्थामा ल्याउने बिषय भएको बुझिएको छ । अर्को विकल्पमा ओलिको साटो अर्को प्रधानमन्त्री एकीकरण पछि कम्युनिस्ट पाटी बनाएर महाधिवेशनमा जाने बिषय छ ।
यसैगरी ,प्रचण्डले भने कुनै हालतमा ओलिलो बहिर्गमनलाइ सर्त बनाएका छन । तर एमाले संग मिल्न ओलिको सत्ता बहिर्गमन पहिलो सर्त हुनुपर्ने बिषय राखेको बुझिएको छ ।